Shona is a Bantu language spoken by roughly 70% of Zimbabweans, and is one of Zimbabwe's official languages. It is the traditional language of Zimbabwe's Shona people, who live in Zimbabwe's central and eastern provinces. Shona has a number of dialects, including Karanga, Korekore, Manyika, Ndau, and Zezuru. Standard Shona is derived from the Central Shona dialects, especially Karanga and Zezuru. According to Ethnologue, Shona is spoken by roughly 10.8 million people, making it the most widely spoken Bantu language of Zimbabwe. The Manyika and Ndau dialects are listed separately by Ethnologue, and are spoken by around 1 million and 2.4 million people, respectively. When Manyika and Ndau are added to the total, Shona is spoken by over 14 million people.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Languages_of_Zimbabwe&oldid=919090557"
Last edited on 1 October 2019, at 19:50